Iju mmiri na China: mmebi na atụmatụ | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 13/01/2022 10:00 | Idei mmiri
N'ihi mgbanwe ihu igwe, oke ihu igwe dị ka idei mmiri na-eji ugboro ugboro na ike. Nke idei mmiri na china na-abawanye nke ukwuu. Ha ebutelarị ọtụtụ mmebi akụ na ụba ma kpatara ọtụtụ ọnwụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Iji mee nke a, ndị China ewepụtala ụzọ ụfọdụ iji nwee ike ịkwụsị idei mmiri ndị a na-egbu egbu.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara idei mmiri na China, mmebi ha na-akpata yana ihe usoro na atụmatụ gọọmentị mere.
1 Iju mmiri na China
2 Atụmatụ iji zere idei mmiri na China
3 Isi ihe dị mkpa
Mmepe China na-atụ n'anya nke ime obodo n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, jikọtara ya na ọdịdị mbara ala na ọdịdị ihu igwe ya pụrụ iche, ewepụtala ngwakọta na-egbu egbu nke idei mmiri mepere emepe na-akpata ọtụtụ nde mmadụ. ọtụtụ narị puku ọnwụ na nnukwu mfu akụ na ụba. E meela ọtụtụ ihe iji mee ihe banyere idei mmiri ahụ. Kedu ihe ha bụ na gịnị bụ nsonaazụ ha? na ndetu na-esote.
Kemgbe 1949, Ihe karịrị nnukwu idei mmiri 50 n'ihi oke mmiri ozuzo, typhoons ma ọ bụ tides emetụtala mpaghara dị iche iche nke ókèala China.. Ihe omume ndị a mere ka gọọmentị mepụta atụmatụ mgbochi iji belata mfu nke mmadụ na ihe onwunwe, na-eme ka mmekọrịta dị n'etiti idei mmiri na mmepe akụ na ụba dị n'usoro.
Akụkọ ihe mere eme na-emesapụ aka ma a bịa n'ọdachi ndị metụtara ide mmiri. Dị ka ihe atụ, na 1931, idei mmiri rikpuru Wuhan ihe karịrị 100 ụbọchị, idei mmiri mere ka ihe karịrị mmadụ 780 ghara inwe ebe obibi ma gbuo mmadụ 000. Ọdachi ọzọ dị njọ mere n’Osimiri Han na 32, gbuo ihe karịrị mmadụ 600 ma mebie obodo Ankang. 1983 mita n'okpuru oke osimiri.
Kemgbe 2000, China enwetala nnukwu idei mmiri ọbụlagodi otu ugboro n'afọ abụọ. Ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama gụnyere idei mmiri nke July 2003, mgbe oké ifufe na-enwetụbeghị ụdị ya mere na Nanjing, na-akpata mmiri ozuzo kwa ụbọchị karịa 309 mm - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ nke mmiri ozuzo kwa afọ na Central Chile - maka ọtụtụ narị ọnwụ, gbakwunyere ihe karịrị nde mmadụ 1.
Na July 2007, Chongqing na Jinan bụ otu n'ime oké ifufe ndị kasị ukwuu n'ime 100 afọ meriri. gburu mmadụ 103, na 2010, Sichuan mere ka ihe karịrị mmadụ 800.000 nwee ebe obibi ma gbuo mmadụ 150. Ihe omuma a gosiputara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke idei mmiri anaghị eme n'ime ime obodo, kama n'obodo ukwu.
N'oge a, ndị ọkachamara n'ime obodo maara nke ọma na obodo nke oge a adịghị ike nke ọma iji gbochie oke mmiri ozuzo ma na-ekwu na ọdachi "oke" nwere ike igbu oge mmepe obodo ruo iri afọ abụọ.
Atụmatụ iji zere idei mmiri na China
Iju mmiri nke ime obodo na-ebutekarị mmebi ma na-emetụta ọtụtụ mmadụ, na mmebi na ihe ndị e merụrụ ahụ na-adaba na mmụba nke obodo ahụ, ya mere ihe ize ndụ na-abawanye kwa afọ ka mmepe obodo na-aga n'ihu, nke na-akawanye njọ ma ọ bụrụ na enwere ike ịnagide ya. Na-etinye nkwụsi ike nke akụ na ụba ọha na eze n'ihe egwu nke mpaghara nke iri iri ma ọ bụ narị nde mmadụ bi.
Iji kwụsị akụkọ ọjọọ a, na 2003, Ministry of Water Resources nke China tụrụ aro ka gọọmentị etiti mee ihe n'okwu a, na-ebute mgbanwe site na usoro iwu nchịkwa ide mmiri na-adịghị arụ ọrụ na amụma njide idei mmiri.
Nke a emeela ka nhazi ọrụ na-arụpụta ihe na mpaghara idei mmiri, mmepe nke atụmatụ mgbochi na usoro usoro iji kwado nchekwa nke ọha mmadụ. Agbanyeghị, a na-eme atụmatụ na 355 n'ime obodo 642 ebe njikwa ide mmiri bụ isi ọrụ -55% - na-eji ụkpụrụ njikwa ide mmiri dị ala karịa nke gọọmentị etiti guzobere.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, China ewebatala echiche nke "nchịkwa ihe ize ndụ" ma tụpụta iwu ọhụrụ. Ya mere, iji si n'ịdabere na usoro nhazi iji belata mmebi idei mmiri gaa n'ịhazi usoro nhazi na nke na-abụghị nke nhazi, Ministry of Water Resources mepụtara National Iju Mmiri Management Strategy na 2005.
Nke a na-akpọ "China Iju Mmiri Control Strategy" nwere ike kọwara nanị dị ka: ọchịchị ndị China na-ekpebi iju mmiri na-adabere na ihe ize ndụ, na-emesi usoro ndị na-abụghị usoro, karịsịa nhazi, akụ na ụba, nkà na ụzụ na mmụta (dị ka Centralized mkpebi ime usoro , mgbochi. usoro, atụmatụ mbelata ọdachi na mkpuchi mkpuchi ide mmiri) na ịkwado mmejuputa atụmatụ iji mejuputa usoro nhazi, dị ka. na-ewusi mmiri mmiri ike, nhazi ọkwa mmiri na iwu nke ọdọ mmiri, iji nweta uru zuru oke na ogologo oge.
Ọrụ atọ dị mkpa nke 'njikwa' ide mmiri bụ:
Wulite ọrụ nchekwa mmiri iji belata ọdachi nke ọma. Oru ngo atọ Gorges Dam dị oke egwu pụtara na ọrụ a.
Jikwaa ọrụ mmadụ iji belata mmebi idei mmiri na mpaghara na-arụpụta ihe.
Iji mmiri idei mmiri eme ihe nke ọma na iji akụrụngwa mmiri fọdụrụnụ eme ihe.
Iji mejuputa atụmatụ a, gọọmentị China achọpụtala isi ihe nkwado maka ọganihu sayensị na nkà na ụzụ, na-eme ka ego zuru oke na ịmekọrịta mbelata ọdachi. N'ikpeazụ, iji idei mmiri obodo na-apụghị izere ezere mee ka ụkọ mmiri na-akpata site na ime obodo ngwa ngwa bụ ezigbo ihe atụ nke atụmatụ China ọ bụghị nanị na-achọ ibelata idei mmiri na mmetụta ọjọọ ha, kamakwa ịchọ irite uru na ọdachi ndị a na-emere onwe ha.
Senator Alejandro Navarro kwuru na Chile ga-agbaso ihe atụ nke China, "ghọtara na ọ ghaghị ịtụ anya ike nke okike site na atụmatụ zuru oke nke, na mgbakwunye na iwu mgbochi mmiri na ọrụ ndị ọzọ, na-eleba anya n'ịkụziri ndị mmadụ na mejuputa atụmatụ mbelata na ndị ọzọ. jikoro. »
Onye omeiwu ahụ gbakwụnyere, sị: "Ọ dịghị idei mmiri a na-atụ anya ebe a ma enwere ọtụtụ ihe akaebe nke a, dị ka ihe mere na Papen Canal ọnwa ole na ole gara aga, ebe ọ dịghị ihe e mere iji chịkwaa mmiri. Mmiri ozuzo, nke mere ka ọwa mmiri ahụ rikpuru ma gbuo. Ọtụtụ narị mmadụ, nke mbụ Steeti ga-akwụrịrị ezinaụlọ ma tinye atụmatụ ka ụdị ihe ọjọọ a ghara ime ọzọ ”, o kwubiri.
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere idei mmiri na China ma nwee ekele maka ime ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Iju mmiri na China